Ny Semalt Islamabad Expert - Inona no atao hoe Optimisation Search Engine (SEO)?
Amin'ny endriny tsotra indrindra, fikarohana fikarohana dia ny dingana amin'ny fampitomboana ny laharan'ny tranonkalanao mba hahatonga azy io ho hita eo amin'ireo rohy vitsy voalohany amin'ny pejy fiverimberenan'ny fikarohana. Mety manontany tena ianao hoe nahoana ny tranonkalanao no mila avoaka. Izany dia vanim-potoana vaovao, ary ny mpanjifa manao fikarohana an-tserasera alohan'ny hametrahana vokatra na serivisy. Raha hita eo amin'ireo rohy vitsy voalohany ny tranonkalanao, dia tsara ny manintona ny mpanjifanao amin'ny rohinao ary manamboatra ny baiko avy aminao matetika.
Michael Brown, manam-pahaizana ambony avy amin'ny Semalt , manazava eto hoe ahoana no fomba hanatanterahana ny laharam-pifaneraserana lehibe indrindra ho an'ny tranokalanao ary hikojakojana azy koa.
Amin'ny sehatra iray, ny SEO dia mikendry ny hahatonga ny tranokalanao ho hita ao amin'ny pejy voalohan'ny motera voalohany. Izany dia satria matetika no tsy tonga any amin'ny pejy fahatelo ny olona alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra. Na izany aza, arakaraka ny fialam-boly misy anao, dia mety ho lafo be na sarotra ho anao ny mamaky pejy iray. Mety ho tonga amin'ny pejy voalohany ianao raha toa ka manam-paharetana ary manaraka ireo fitsipika asongadina etsy ambany.
Ny votoatinao dia tokony hanan-karena amin'ny teny fanalahidy manan-danja
Mamantatra ireo karazana tranokala amin'ny alalan'ny fitaovana antsoina hoe spiders. Ity fitaovana ity dia mikaroka ny tranonkala amin'ny fomba maoderina. Ny faharetan'ny sivana amin'ny tranonkalanao dia mamaritra ny halehiben'ny asanao ary ny mpitaingin-tsoanao dia mamaritra anao ny lanjanao amin'ny toetranao.
Izany no antony maha-zava-dehibe ny hahafantaranao ny teny fanalahidin'ny mpanjifanao amin'ny karoka fitadiavana. Hanampy anao hampivelatra ny votoaty manodidina ny teny fanalahidy izany. Ohatra, raha manolotra tolotra ara-dalàna ho an'ny tra-doza ianao, ireo mpanjifanao mety ho mety dia mety hanondro teny fanalahidy toy ny "mpampanoa lalàna any South Florida". Noho izany ny votoatinao dia tokony hampiditra ny teny rehetra azo atao.
Amin'izao fotoana izao dia zava-dehibe ny manamarika fa tsy afaka mamantatra lahatsoratra ao anaty sary ny mpitsikilo. Noho izany, tokony ho azo antoka fa tsy tafiditra ao anaty sary ireo tenimiafinao. Ankehitriny, fa azonao ny maha-zava-dehibe ny teny fanalahidy manan-danja, mety hanontany tena ianao hoe ahoana no ahazoanao ny teny fanalahidy manan-danja ho an'ny nichanao..Ny zavatra rehetra ilainao dia fitaovana maimaim-poana antsoina hoe fitaovana maoderin'ny Google AdWords. Ity fitaovana ity dia hanampy anao hamantatra ireo teny fototra rehetra mifandraika amin'ny lozanao. Noho izany, mila miantoka ianao fa miseho ao amin'ny votoatinao sy ny metadata ao amin'ny pejyo ny teny fanalahidy rehetra.
manan-danja ny fifandraisana
Ny laharan'ny pejy anao dia isa 1 hatramin'ny 10 nomena ny tranonkalanao mifototra amin'ny rohy ivelany sy aterany. Mba hanatsarana ny toerana misy anao, ataovy azo antoka fa mifandray amin'ny tranonkalanao ny kaonty media sosialy rehetra. Raha mifandray amin'ny tranonkala avo lenta ny tranokalanao, dia hitondra ny "jiosy mifandraika" amin'ny tranokalanao izany, ka hampakatra ny laharan'ny tranonkalanao koa. Azonao atao koa ny manaparitaka ny lisitry ny torolàlana malalaka sy azo atokisana ary ny vatana matihanina mifandraika amin'ny alikao satria mety hikaroka amin'ny findainao ihany koa ny mpanjifa.
Mba hahafantarana ny isan'ny tranonkala dia azonao atao ny mametraka plugin iray toy ny "PageRank Status". Miara miasa amin'ny Google Chrome izy io. Ny fahafantarana ny toerana misy anao dia hanampy anao hanara-maso ny fanatsaranao.
Atao foana ny votoatiny
Ny tombam-bidin'ny fisidinan'ny milina fikarohana dia mitana toerana lehibe eo amin'ny toerana misy anao, ary avy eo, miankina amin'ny fihodinanao ny fitehirizana ny votoatiny. Isaky ny mandefa votoaty vaovao ao amin'ny tranonkalanao ianao, dia ho avy ny mpikaroka hitady ny tranokalanao. Ankoatra izany, ny mpitsidika koa dia tia mamaky votoaty vaovao.
Noho izany dia tokony hitazona foana ny ao anatiny foana ianao. Esory ny lahatsoratra taloha, sary / sary, ary horonan-tsary ary asolo azy ireo vaovao sy mahaliana. Azonao atao ny manangana blôgy ao amin'ny tranokalanao ary manavao ny blôgy miaraka amin'ny votoaty vaovao isan'andro na isan-kerinandro. Amin'ny voalohany, mety ho sarotra izany, nefa tsy ho mora ny hampiasana azy io.
Azonao atao ny mampiasa ny Alert Google. Hampahafantarinao foana ny tenimiafinao mba hampivoarana ny votoatinao.
Alamino ny teknolojia SEO
Ny fitsipika, ny fitsipika, ary ny algorithm ho an'ny toerana dia tsy miorina. Mavitrika izy ireo, ary miova be matetika izy ireo, ka mila manaraka ny algorithm. Ohatra, talohan'izao fotoana izao, ny tranonkala dia tsy miankina amin'ny habetsahanao amin'ny votoatiny. Ankehitriny, misy imbetsaka indraindray ny tenimiafina dia ahafahana miseho amin'ny votoatin'ny teny maromaro. Raha tsy izany, ny votoatinao dia hajaina ho toy ny spam, ary hampidina ny laharana izany Source .